Ukumaketha Kwakho Okuphumayo Kusebenza Kancane ngaphandle Kwemizamo Engenayo | Martech Zone
NgoLwesithathu, Juni 8, 2016 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 13, 2021 Douglas Karr
Uma uke waba umfundi webhulogi yami isikhathi eside, uyazi ukuthi igama Ukuqhathanisa uvame ukungithumela entukuthelweni engaboni. Abantu abangaphezulu kweSoftwareAdvice bathumele i-athikili enemininingwane, Ukumaketha Okungenayo Nokuphumayo: I-Primer yamaNewbies noma amaSwitchers.
Umhlahlandlela wenza umsebenzi oncomekayo wokuhamba ngamasu, umehluko, kanye namathuluzi wamasu angenayo namasu aphumayo. Kukufanele kakhulu ukufundwa ngakho hamba uyohlola. Nayi enye yemidwebo:
Ukuphuma akusebenzi kahle ngaphandle kokungenayo
Sisebenza nezinhlangano eziyiziqalo ezincane kuze kufike ezinkampanini zebhizinisi. Akukho okuhlukile kulo mthetho engiwabelana ngawo:
Ukumaketha okuphumayo akusebenzi kahle ngaphandle kwamasu wokumaketha angenayo
Ngabe ungenza ucingo olubandayo futhi uqobo ukhulise ubudlelwano (obuphumayo) bese uthola ukuthengisa? Kunjalo! Angishongo ukuthi ukuphuma akusebenzi ngaphandle kwamasu angenayo, ngishilo ukuthi kunjalo ayisebenzi kahle.
Ucabanga ukuthi yini into yokuqala eyenziwa ngumthengi noma ngebhizinisi ngemuva kokufunda ngebhizinisi lakho ngocezu lwemeyili eqondile, ucingo olubandayo, noma ukuvakashelwa? Eqinisweni, ucabanga ukuthi benzani ngenkathi befunda ngebhizinisi lakho ngocezu lwemeyili eqondile, ucingo olubandayo, noma ukuvakashelwa?
Ukuhola kwakho okuphumayo kuyakucwaninga ku-inthanethi!
Ukusesha okulula kweGoogle ukuthola isiza sakho nokufunda okuqukethwe kwakho kuzolandela ucingo olubandayo. Ngemuva kwalokho baya ku-LinkedIn bese babuyekeza imininingwane yakho nokuthi ubukeka unelungelo noma cha. Futhi-ke bafinyelela ngemithombo yezokuxhumana kunethiwekhi yabo ethembekile bese bebuza, Ngabe ukhona owake wasebenza nalaba bantu?
Futhi lowo ngumzuzu obucayi wokuthi iqembu lakho eliphumayo lidinga ukuchitha ukuvakasha okuningi ukukhulisa ukuhola, ukufaka ingcindezi engenangqondo ukuvala ukuthengisa, noma ukukulahlekisela kumncintiswano owenza umsebenzi ongcono kakhulu ngokukhangisa kwabo okungenayo.
Sisanda kwabelana ngani Ama-CMO abekade ewafuna kuma-ejensi awo, futhi izici ezimbili zazingu ulwazi futhi usizo. Uma inkampani yakho, umkhiqizo, noma insiza yakho ingamelwe kahle ekusesheni, kwimidiya yezenhlalo nangokusebenzisa okuqinile umtapo wokuqukethwe, amathuba akho okuvala ukuthengisa anciphile.
Okubi kakhulu, uma izimbangi zakho zimelwe kahle, manje unethemba elishisayo elizoqala ukuthenga. Futhi njengoba bebukeza ukuma okungajwayelekile kobuqhudelana bakho nobuholi esikhaleni, bazoba nokungabaza ngokuthi bangayisebenzisa noma cha insiza yakho.
Futhi okuphumayo kuthuthukisa imizamo engenayo
Ngizofaka elinye igugu lapha… okungenayo kusebenza kakhulu ngokukhangisa okuphumayo, nakho! Wake wafuna ithemba lokuthi lilande izinto ezimbalwa, livula ngenkuthalo futhi lichofoze izincwadi zakho ze-imeyili futhi livakashela isiza sakho ngezikhathi ezithile?
Akunjalo Ukuqhathanisabakithi! Imizamo yakho yokumaketha ephumayo izokwanda kakhulu ngecebo elivelele lokumaketha okungenayo. Futhi isu lakho lokumaketha elingenayo lizothuthuka uma usebenzisa leyo datha ukondla isu lakho lokukhangisa eliphumayo.
Tags: marketing kwangaphakathiumhlahlandlela wokuthengisa ongenayokwangaphakathi kuqhathaniswa nokuphumayoOkungenayo nokuphumayoukumaketha okungaphandleumhlahlandlela wokuthengisa ophumayoumabhebhasiUkuqhathanisavs
UJun 9, 2016 ngo-2: 27 AM
Ngiyabonga ngolwazi. Ukungena ngaphakathi noma okuphumayo, ukumaketha kuyingxenye ebalulekile yawo wonke amabhizinisi futhi ngaphandle kwawo awume ndawo kwabezindaba.
Sep 21, 2017 ku-6: 26 AM
Okungenayo kube khona isikhathi esithile asikuboni nje ngenxa yokubaluleka okunikezwe kumakethi ophumayo. Njengoba i-Intanethi iye yanda kuwo wonke amakhaya, kunzima ukuphika ukufinyelela okukhulu nomthelela wokukhangisa okungenayo.